» अझै पनि मानिसलाई बिमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढेको छैन: सञ्चित बज्राचार्य
सिइयो, प्रभु इन्स्योरेन्स
बिमा कम्पनीहरुको अवस्था कस्तो छ ?
–अहिले सामान्य रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । भुकम्पको समयमा अलि बढी प्रभाव परेको थियो । भुकम्पबाट भएको क्षतिको दाबीको भुक्तानी दिने क्रम अहिले अन्तिम चरणमा छ ।
भुकम्पपछि प्रभु इन्स्योरेन्समा कतिको दाबी परेको थियो ?
–सुरुमा १ अर्ब ७ करोडको दाबी परेको थियो । ११ सय ४७ वटा दाबी परेको थियो । पछि झण्डै ९० करोडको दाबी पर्यो । हामीले अहिलेसम्म पचासी प्रतिशत भुक्तानी दिइसकेका छौ ।
बिमा किन र के का लागि गर्ने ?
–आर्थिक दायित्वबाट मुक्त हुन बिमा गर्ने हो । भविष्य सुरक्षित गर्नकै लागि बिमा गर्ने हो । अहिले पनि आम मानिसहरु बिमा गर्न हिच्किचाउने गरेका छन् । जनचेतनाको अभावको कारण बिमा गर्नेहरुको सङ्ख्या ज्यादै कम रहेको छ । गत बर्ष भुकम्प गयो । भुकम्पको कारण ठूलो क्षति भयो । तर पनि अझै पनि मानिसलाई बिमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढेको छैन । बिमा गर्ने बारेमा एउटा कम्पनीले मात्र भनेर पुग्ने अवस्था छैन । सबैले सामुहिक रुपमा अगाडि बढ्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । सबै भन्दा ठूलो कुरा पाठ्यक्रममा नै बिमा सम्बन्धी शिक्षा समावेश गराउनु पर्छ । यस्तो व्यवस्था भयो भने सानैदेखि बिमा गराउनु पर्छ भन्ने चेतानाको बृद्धि हुन्छ । नेपालमा हाल १७ वटा ननलाईफ बिमा कम्पनीहरु छन् । सबैले आफ्नो ढंगबाट काम गरिरहेका छन् ।
बिमा कम्पनीहरु पारदर्शी हुँदैनन भन्छन नि ?
–पारदर्शीता नहुने भन्ने त प्रश्न नै उठदैन । किनभने यो लुकाएर गर्ने काम होइन । बिमा गरेपछि दाबी पर्छ र हामीले भुक्तानी गर्छौ । दाबी गरेपछि त्यसको अध्ययन अनुसन्धान स्वतन्त्र निकायले गर्छ । सोही अनुसार भुक्तानी दिने गरेका छौ । यहाँ अपरादर्शीता हुन्छ भनेर भन्न नै मिल्दैन ।
बिमा गर्न सजिलो भुक्तानी पाउन अपठ्यारो भयो भन्ने गुनासो छ नि ?
–यो गलत कुरा हो । मानिसले बिमा भविष्यमा हुने क्षतिको सोध भर्ना पाउनको लागि गर्ने हो । त्यसको लागि एउटा प्रक्रिया हुन्छ । आवश्यक प्रक्रिया पुगेको अवस्थामा सात दिनभित्र नै दाबी भुक्तानी हुन्छ । सेवाग्राहीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । क्षति भएको हो कि होइन भनेर जाँचबुझ गनु पर्यो । आवश्यक काजपत्र चाहियो । सबै प्रक्रिया पूरा गर्यो भने सर्वे रिपोर्ट पनि छिटो नै हुन्छ । एकै पक्ष दोषी चाँही भन्ने होइन । सबैमा शिक्षाको महत्व छ । जाने बुझेका मानिसहरु कोही पनि कराउँदैन । प्राइभेट गाडीको मान्छे आएर दबाब प्रेसर दिदैनन् । बिमा कम्पनीले स्वतन्त्र निकायलाई खटाउँछ ।
प्रभु इन्स्योरेन्समै बिमा किन गर्ने ?
–१७ वटा ननलाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु छन् । सबैको आ–आफ्नो विशेषता होला । हामी अनलाइन पोलिसी जारी गछौ । हामीले अहिलेसम्म स्तरीय सेवा दिदैँ आएका छौँ र भोलीका दिनमा पनि दिन्छौँ । हामी बिना झन्झट सेवा दिन्छौँ । सेवाग्राहीलाई सेवा पुर्याउनु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । बिमा गराउनु अघि सम्पूर्ण जानकारी दिएर मात्र गर्छौ।
हाम्रो देश गरिबीको रेखामुनि छ । कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि सम्पत्ति निकै दुःख गरेर आर्जन गरेको हुन्छ । एउटा घर बनाउनको लागि जीवनभरको कमाई खर्च गर्छ । क्षति भयो भने तुरुन्तै निर्माण गर्न सक्दैन । चिन्ता र दायित्वबाट मुक्त बिमाले मात्र गराउन सक्छ । नेपालमा बिमा महंगो पनि छैन् । हामी मोबाइल हरायो भने महंगो मुल्यमा महंगो मोबाइल किन्छौँ । तर हामी पाँच हजार तिरेर बिमा गर्दैनौँ । शिक्षा र जनचेताको अभाव नै मुख्य कारण हो ।
प्रभु इन्स्योरेन्समा बिमा गर्नेको सङ्ख्या कति छ ?
–हालसम्म पैतिस हजार भन्दा बढी छन् । यो सङ्ख्या निकै कम हो । हाम्रो पैतिस वटा शाखा रहेको छ । बनेपा, बिराटनगर, इटहरी, वीरगन्ज हेटौडा, नारायणगढ, दाङ बुटवल, धनगढी पोखरा बाग्लुङ, मुस्ताङ लगायतका स्थानमा रहेको छन् । आवश्यकता अनुसार शाखा थप्दै लैजाने योजना रहेको छ । तर सबै भन्दा ठूलो कुरा ग्राहकहरुमा जागरुकता आउनु पर्यो । तब मात्र शाखा विस्तारको काम अगाडि बढ्छ ।
मुस्ताङमा बिमा गर्नेहरुको सङ्ख्या कस्तो छ ?
–मुस्ताङमा कृषि बिमा गर्नेहरुको सङ्ख्या राम्रो छ । यातायात पुगेको छ । व्यापार व्यवसाय हुन्छ । स्याउ, होटल चौरीको बिमा हुन्छ ।
समग्र बिमाको अवस्था कस्तो छ ?
–हाम्रो देशमा छ-सात प्रतिशत भन्दा बढीले बिमा नै गर्दैनन । सबैले बिमा गर्ने हो भने यसको प्रतिशत बढ्छ । बिमा कम्पनीहरुले पनि बिमा गराउनु पर्छ भनेर नागरिकहरुलाई बुझाउने काम गरेको छ । सरकारले पनि बिमा गराउनु पर्छ भनेर प्रोत्साहन गरेको छ । बिमा समितिबाट हुने काम पनि सहज रुपमा हुँदै आएको छ । बिमाको अवस्थामा सुधार गर्न एक जना लागेर मात्र हुँदैन । सबैलाई आर्थिक रुपमा समस्या छ । जानजान नचाहेर पनि बुझ्न नचाहेको पनि होइन ।
भुकम्प जानु अघि कहिले मानिसहरुलाई कहिले जान्छ भुकम्प किन बिमा गर्नु भन्ने मानसिकता थियो । बिमा गर्नेहरुले बिमा रकम पाएका छन् । हजार तिरेर लाखौँ करोडौँ पाउने हो ।
त्यसो भए बिमा गर्न मानिसहरु किन जाँगर गर्दैन त ?
–विदेशमा कुनै पनि काम गर्दा बिमा नगरी केही काम नै गर्दैनन् । विदेशबाट एरपोर्टसम्म बिमा हुन्छ । त्यसपछि हुँदैन । हामी विदेश जाँदा एरपोर्टबाटै बिमाको खोजी हुन्छ । व्यवसाय गर्नेहरुले बैंकको कारणले पनि बिमा गर्छन । करोडौ रुपैयाँ खर्च गर्न तयार हुने तर वीस हजार रुपैयाँ बिमा नगर्ने ? सरकारले पनि अब बिमालाई अनिवार्य रुपमा लागू गराउनु पर्छ । सरकारले चाहेको अवस्थामा कार्यान्वयन गराउन सक्छ ।
अहिलेसम्म कुन क्षेत्रमा बढी हुँदै आएको छ ?
–बिमा गर्नेहरुको सङख्या गाडीमा बढी छ । निर्माण,व्यवसाय गर्ने लगायतको क्षेत्रमा बिमा छ । पहिला कुरा मैले लगानी गरेपछि कसरी सुरक्षित हुने भनेर सोच्यो भने बिमा निस्कन्छ । हरेक काम गर्नु अघि बिमा गर्ने बानीको विकास गरौँ । हजार तिरेर आगामी दिनमा हुन सक्ने सम्भावित आर्थिक दायित्वबाट बिमाले मात्र मुक्त गराउन सक्छ ।